Göteborg: Raggii lagu eedeeyay in ay dili rabeen Vilks oo la siidaayay | Somaliska
Göteborg: Raggii lagu eedeeyay in ay dili rabeen Vilks oo la siidaayay
3 nin oo ay ku jiraan ragg Soomaali ah oo bishii September loo soo xiray in ay doonayeen in ay dilaan ninka caadeystay aflagaagada nabiga (scw) ee lagu magacaabo Lars Vilks ayaa maxkamadi amartay in xabsiga laga siidaayo ilaa kiiskooda go’aan laga gaarayo.
Ragga kala ah Abdi Aziz Mahamud, oo Somali aan dhalashada qaadan ah iyo Salar Sami Mahamood iyo Abdi Weli Mohamud ayaa bishii September waxaa loo soo xiray in ay doonayeen in ay dilaan Vilks oo booqasho ku imaanayay Göteborg. Maxkamada ayaa loo soo bandhigay cajalado laga duubay telefoonada raggaan ay ku wada xiriireen.
Maxkamada ayaa la filayaa in ay go’aanka rasmiga ah ay gaarto bisha Janaayo 20-keeda balse qareenka u doodaya raggaan ayaa sheegay in ay liidato cadeynta ay soo bandhigeen dambi oogayaasha sidaa darteedna ay u badantahay in raggaan aysan xabsi ku noqon doonin.
Raggaan ayaa cadeeyay in ay neceyb u qabaan Vilks balse aysan dooneyn in ay dilaan. Hay’ada amaanka ee Säpo ayaa la sheegay in mudo ah in ay raggaan ku haysay kormeed maadaama uu jiray shaki soo galay.
Lars Vilks ayaa dhowr jeer ka badbaaday isku day dil ka dib markii uu sawiray kartoono uu ku aflagaadeeyay nabi muxammed (nnkh). Weerarada lagu qaaday ninkaan ayaa waxaa ka mid ahaa in gurigiisa dab la qabadsiiyay iyo in hada ka hor isaga oo jaamacada Uppsala ka hadlaya weerar gacan ka hadal ah lagu qaaday. Dowlada Sweden ayaa lacag uga baxdaa sugitaanka amaanka Vilks oo dhuumasho ku nool.
Maxkamada Socdaalka oo dib u dhigtay go’aankii ku saabsanaa Soomaalida
Gabdhaha Soomaalida iyo ragga ajaanibta?
Sweden oo 200 qof ka soo qaadaysa Libya
December 29, 2011 at 20:29
walalahena allaha gacanta cadawga ka soosaray ayey mahad u sugnaatay ka gadaal gaalkaas buuryo qabka ah gacanta musliminta ayuu ilaahey ku ciqaabidonaa aakhirana cadaab kan ugu daran insha’allah hadii naxariis badanaha aanu hanuun ladoonin
December 29, 2011 at 23:35
Sheydaan weynaadey dheh Ilaahay qalbigiisa rucbi ayuu ku beeray, bal muu iska aamuso afka laga goo maxuu Nebiga sharafta leh SCWS uu u aflagaadeey.
Inshaa Allaah silic ayuu u dhiman doonaa.